संवैधानिक समितिद्वारा सभामुखलाई प्रतिवेदन पेश-NepalKanoon.com
संवैधानिक समितिद्वारा सभामुखलाई प्रतिवेदन पेश
भाद्र २१, काठमाण्डौ । सहमति गर्ने कार्यतालिकाअनुसार संविधानका अर्न्तवस्तुमा सहमति हुन नसकेपछि संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई भदौ २२ गते समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
समितिको प्रतिवेदनमा सहमति भएका र टुङ्गो लाग्न बाँकी दुवै विषय समेटिएका छन् । प्रतिवेदनमा चार महिनाको कामको समीक्षा गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदनमा विवादित विषयहरूमा असहमति भन्दा पनि छलफलका लागि समय अपुग भएर नटुङ्गिएको उल्लेख गरेको समितिका सभापति डा. भट्टराईले सञ्चारकर्मीलाई बताए ।
राज्य पुनः संरचना, शासकीय स्वरुप, प्रदेशको नामाकरण, सङ्घीयता लगायत बिवादीत विषयमा सहमति नजुटेपनि सम्वाद समितिको भदौ २१ गते बसेको बैठकले टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयमा थप छलफल आवश्यक भएको सुझावसहित संविधानसभालाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदन अब संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेश हुनेछ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभा नियमावली र कार्यतालिका बमोजिम प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाई प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल हुने बताएको सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । नेम्वाङले समितिमा सहमति भएर मिलेका विषयमा संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइने र असहमतिलाई नियमावलीअनुसार संविधानसभाबाट टुङ्गो लगाइने बताएका छन् ।
समितिको भदौ २१ गतेसम्म मात्रै म्याद रहेको थियो । समयसीमा भित्र विवादित विषयहरूमा छलफल अपुग भएकाले संविधानसभाको कार्यतालिका हेरफेर गरेरै भएपनि विवादित विषयमा सहमति जुटाउनु पर्ने भन्दै समितिका सभापति डा.भट्टराईले प्रमुख दलहरूसँग भदौ २१ गते थप समयको माग गरेका थिए ।
प्रमुख दलहरू पनि समितिको अनुरोधअनुसार समितिको म्याद गरी बाँकी विषयमा सहमति जुटाउनका लागि भदौ २१ गते सहमत भएका थिए । यदि म्याद थप गर्ने प्रस्ताव संविधानसभाबाट पारित भएमा असहमतिको विषयलाई पुनः सम्वाद समितिमा गरी छलफल गरिनेछ । संविधानभाको बैठक भदौ २५ गते बस्दैछ ।